Asalka Siiriyaanka ah ee Apple | Wararka IPhone
Asalka Suuriya ee Apple
Wararka IPad | | Noticias, Alaabada Apple
Maanta waa a maalin muhiim u ah qoyska tufaaxa, maanta waxay soo bandhigayaan waxa noqon doona waxsoosaarka shirkadda ee sanadka 2016, badeecado calaamadeyn doona natiijooyinka dhaqaale ee shirkadda bilaha soo socda. Warka tikniyoolajiyadda ee ahmiyadda weyn u leh ee aan ahayn inuu naga dhigo mid ilooba waxa adduunka ka dhacaya Waxaan hadda ku nool nahay maalmo kooban oo ay Riwaayad bani'aadamnimo oo ka dhalatay dagaalka Suuriya ayaa buuxisay bog kasta oo ka mid ah wargeysyadeena, furitaanka wargelin ah... dhibaato bina-aadamnimo oo ay u badan tahay inay noqoto tii ugu xumeyd taariikhda, taasna waxay dhacaysaa qarnigii XXI, oo ah qarnigii ay ahayd inaynaan ka hadlin wax aan ka ahayn tiknoolajiyadda.
Waa sidaas Apple wuxuu leeyahay taariikh Suuriya, Apple deyn badan ayaa lagu leeyahay SuuriyaQaar badan oo ka mid ah aaladaha aan kula shaqeyno howlaheena maalinlaha ah wax badan ayaa lagu leeyahay wadankaas oo si dhib yar looga hadlay 20 sano ka hor, hadana aduunka aad uga walwalsan. Isagu ma yahay asalka mid ka mid ah dadka ugu khuseeya tikniyoolajiyadda adduunka, asalka aasaasaha Apple, ee Steve Jobs. Asal ay tahay inuu baraarujiyo dhammaan dadkaas aan weli fahmin waxa adduunka ka dhacaya. Haa, mahadsanidiin muhaajir Siiriya oo Apple ah ayaa jira.
Inbadan oo idinka mid ah waxay ogaan doonaan in Steve Jobs uusan la soo korin waalidkii dhalay laakiin uu la koray Paul iyo Clara Jobs, laakiin asal ahaan wuxuu ku jiraa Abdulfattah Jandali iyo Joanne Carole Schieble. Jobs aabihiis, Abdulfattah Jandali, wuxuu ahaa kan ugu yar sagaal walaalo ah oo ka soo jeeda qoys caan ah oo reer Siiriya ah, aabihiis (Jobs awoowgiis bayooloji) wuxuu lahaa dhowr warshad shidaal oo ku yaal Dimishiq iyo Homs, wuxuuna u yimid inuu xakameeyo qiimaha qamadiga ee dalka. Qoyska Jandali ayaa siiyay ahmiyad weyn u leh waxbarashada sababtaas darteed Abdulfattah ayaa loo diray inuu wax ka barto Jaamacadda Mareykanka ee Beirut. Kadib qalinjabinta, u safray Mareykanka inuu u shaqeeyo kaaliye ahaan bare cilmiga siyaasada.
Waxay ku jirtay Jaamacadda Wisconsin halkaas oo uu kula kulmay da 'yarta Joanne. Joanne aabihiis wuxuu ahaa qof aad u adag isla markaana ma uusan jeclayn fikradda ah in gabadhiisu ay xiriir la bilawdo macalinkooda xirfadda, oo isna Muslim ah Si kastaba ha noqotee, lammaanuhu way gudbeen laba bilood oo ka mid ah xagaagii 1954 magaalada Homs, markay soo noqdeen ayay ka war heleen Uurka Joanne iyo dhibaatooyinka soo food saari kara aabbe Joanne awgeed ayay go’aansadeen sii korsashada Paul iyo Clara Jobs.
Waqti aad ku caawiso
Fursadda u qaado kugu dhiirrigeliya mid ka mid ah ficillada badan kuwaas oo u qaadaya kooxo dad aan la garanayn caawi qaxootiga Syria, Gawaarida gargaarka aasaasiga ah ee Budapest. Waxa kale oo aad gacanta ku haysaa suurtagalnimada inaad ka caawiso hay'adaha sida Unhcr, Unicefama CARAR (Guddiga Isbaanishka ee Gargaarka Qaxootiga). Wiilasha Apple waxay had iyo jeer abaabuleen ololeyaal midnimo iyagoo adeegsanaya dukaankooda elektarooniga ah, xitaa ma jiro wax war ah oo la xiriira wax la xiriira dhibaatada bani'aadamnimo Siiriya laakiin hadii ay bilaabaan dadaalka waxaan kugula socodsiin doonaa iPad News.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Asalka Suuriya ee Apple
Saadaasha Shakhsiyeed: Maxaan ku arki doonnaa dulucda maanta?
Sida ugu fiican ee dusha sare ee hadda kujira iPad-ka mahadnaqa Logitech